Qurba joogta ay isku degaanka yihiin Musharrax M/Xigeenka Waddani Amb. Mohamed Ali oo xalay shir telefoon yeeshay iyo warbixin ay ka dhegeysteen Wasiir Obsiye oo ka mid ah xukuumadda Kulmiye. | Awdalpress.com
Qurba joogta ay isku degaanka yihiin Musharrax M/Xigeenka Waddani Amb. Mohamed Ali oo xalay shir telefoon yeeshay iyo warbixin ay ka dhegeysteen Wasiir Obsiye oo ka mid ah xukuumadda Kulmiye.
Waxa Daabacay staff-reporter on Sep 4th, 2017 and filed under Daily Somali News, OPINION. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Awdalpress – London – Habeenkii xalay ahaa waxa beesha uu Musharrax Mohamed Ali ka soo jeedo ee qurba joogta ah u qabsoomay shir telefoon, oo ay ka soo qayb galeen aqoon yahanno iyo waxgarad miisaan culus ku leh degaannada Borama iyo barigeeda.
Shirkan oo noociisu ahaa mid cusub, laba cisho ka horna iclaamintiisa lagu soo qoray shabakadda Awdalpress.com, ayaa markii hore laga diday qaabka loo iclaamiyey ogeysiiska, kaasi oo dad badani wax iska weydiiyeen, sababta shabakadda loogu soo qoray telefoonka lagu galayo iyo password-ka tooska loogaga qay galayo shirka. Laakiin hawlwadeennada hoggaanka u hayey farsamada shirka oo xirfad weyn u lahaa shirarka noocan ah, ayaa qurba joogta shirka loo qabtay ku qanciyey in aanay shirka cid walba iska soo geli karin, waanay suurta geliyeen.
Shirku waxa uu bilaabmay 7dii iyo rubuc wakhtiga England, waxana khadka soo galay dad aad u badan, inkasta oo aanay dad badan oo kale u suurta gelin in ay ka soo qayb galaan. Hoggaamiyaha shirka oo ahaa aqoon yahan Mohamed Osman Dhirane ayaa si habsan u bilaabay, waxana sida caadiga u ah shirarka lagu furay Aayado Qur’aanka kariimka ah oo uu akhriyey Xaaji Osman Sh. Omer Sh. Muse, kadibna, waxa uu Mudane Dhirane si faah faahsan uga hadlay ujeeddada shirka loo qabtay iyo qodobka lagaga hadlayo maanta.
Dhirane oo ka warbixiyey arrinta ugu muhiimsan ee shirkani daarran yahay amma lagaga hadli doono, ayaa uu si faah faahsan u sharraxay, waxana uu hadalkiisii u dhigay Sidan. ” Walaalayaal Waan idin salaamay.
Salaan kadib, waxan ognahay in dalkeennii Somaliland dhawaan loo diyaar garoobayo doorasho, immigana ay dhawdahay wakhtigii uu ololuhu bilaabmayey. Codka shacabkeenna gudaha joogaa waa muhiim, waxana ay ku beddelanayaan in ay helaan dawlad wax u qabata iyo karaamo in ay ku yeeshaan Somaliland, oo la dhegeysto. Balse aanay da’yarta soo koraysaa, ku danbayn kuwo mustaqbalkoodu noqdo suuq joog bilaa camal ah, oo cidlooyinka dalan doola amma badaha isku gura.
Sida aan la soconno dad badan oo aan ka mid ahay, waxan taageerraa amma la shaqaynaa xisbiga Waddani ee uu innooga sharraxan yahay Amb. Mohamed Ali. An taageerree, weli waxba iskama aynaan weydiin, waxa uu xisbiga Waddani dadkeenna iyo degaankeenna u hayo. Ma jiraan odayaal iyo waxgarad hor fadhiistay Cirro iyo Musdanbeedkiisa aan bahwadaagta nahay ( marka aan sidaa leehay waxan u jeedaa taageerayaasha xisbiga ee ka soo jeeda xisbiga ee reer Awdal oo dhan ). Sidaasi daraaddeed, waxan aamminsahay in la soo gaadhay xilligii la wada xisaabtami lahaa, tooshkana lagu qaban lahaa arrimo badan oo su’aalo ka taagan yihiin.
Waxa aan ognahay, in saddex jeer ay xafiiska Guddoomiye Cirro ka soo bexeen wareegtooyin lagu magacaabay xoghayeyaal iyo guddiyo, laakiin haddaan nahay shacabka Waddani taageera ee beeshan amma reer Awdal ee raba in ay codkooda isla daba taagaan Amb. Mohamed Ali, kumaynaan qanacsanayn guddiyadaa iyo xoghayaashii ka horreeyey ee la magacaabay. Barri haddii uu xisbigu hanto talada dalkana waxan aamminsahay in uu cidlo inna dhigi doono, haddii xisaabtan iyo ballan la kala galaa aanay jirin, Amb. Mohamed Ali oo kali ahina aanu ku fillayn soo dhicinta baahiyaha ay shacabkeenna iyo degaannadeennu u baahan yihiin.
Sidaa awgeed, sababta maanta iyo maalmo kale isku keen keentay amma isku keen keeni doonta ee aan ka wada hadli doonnaa, waa taasi. Waxanan u arkaa in ay muhiim tahay in aan xisbigeenna la xisaabtanno, musharrexeeenna la xisaabtanno, oo aan ka wada soconno meesha ay wax marayaan, si aan kalsooni buuxda u siinno xisbiga Waddani iyo musharrixiintiisa”.
Kadib, waxa bilaabmay dooddii iyo talo is weydaarsigii, waxa isna si mug leh uga hadlay mawduucaasi shirka mudane Ahmednuur Muhumed Nuur ( Coday ), oo ka mid ah muddakarka shirka ka soo qayb galay ee u dhuun daloola siyaasadda Somaliland. Waxanu hadalka ku bilaabay sharraxaad uu ka bixiyey nooca ay tahay siyaasadda Somaliland iyo in ay habboon tahay horta in la fahmo siyaasaddaasi, maxaynu doonaynaa amma halkeen u soconnaa? ayuu ku bilaabay hadalkiisa.
Waxana uu Coday ka dhawaajiyey, in isla xisaabtanku ay ka mid tahay siyaasadda. Waxanu soo dhaweeyey hadalka Dhirane. Kadibna waxa uu dib ugu noqday taariikhda Somaliland iyo sida beeluhu wax u qaybsadaan amma loo wada hadlo, oo uu aad ugu dheeraaday. Markii uu hadalkii dhammeeyeyna sacab iyo qosol ayaa la maqlayey.
Ugu danbayna Coday waxa uu hadalkiisii kaga baxay guubaabo iyo talo ah, in fahmo badan loo yeesho siyaasadda khayaamada badan iyo ku-daygu ku badan tahay ee Somaliland. Ugu danbayna waxa uu kaga baxay. “Musharrax Mohamed Ali-na kelidii kuma filla in uu soo dhiciyo baahiyaha dalkeennii iyo dadkeennii qabaan, balse waa in uu yeeshaa la taliyayaal shacabka hanan kara, oo dantooda gaar ka hor mariya ka guud helaa”.
Markay dooddii halkaa marayso, rag badan oo kelana ay hadleen, ayaa waxa khadka la soo geliyey Wasiir Mohamed Abdillaahi Obsiye oo dhawaan ka yimid dalkii, waxana shir guddoonku ka codsaday in uu ka warbixiyo ka siiyo dalkii iyo siyaasaddu halka ay marayso ee aragtidiisa ah.
Wasiirkuna waxa uu ku billaabay. ” ACW dhammaantiin, Eid Mubaarik. Walaalayaal amma adeerrayaal, waxan anigu ahay wasiir u shaqeeya xukuummadda Somaliland ee immiga jirta, waxanan ka tirsanahay xisbiga Kulmiye. Walaalkay Musharrax Amb. Mohamed Ali iyo taageerayaashiisana ixtiraam badan ayaan u hayaa, wada dhalasho iyo dhiig aan sinaba ku baaba’ayn ayaana naga dhaxaysa, tolnimadu kuma baaba’do doorasho bilo socota amma siyaasad lagu kala fikir duwan yahay. Oo taasi way dhammaan, wada dhalashaduse dhammaan mayso, ee horta taa halla ogaado.
Obsiye isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi, ” Tolkayow haddii aad qurba joogtihiin waxa aan la soconnaa, in aad talo iyo taakulaynba la garab joogtaan xisbiga Waddani, laakiin ogaada in Waddani guul-darraysan karo, oo loo baahan yahay in aan hello alternative kale oo badhkeen dhinaca kale ee Kulmiye la shaqeeyaan. Sidaasi ayaan aniga iyo in badan oo kaleba ugu jirraa xisbiga Kulmiye, taageeradiinnana aan ugu baahannahay amma waa sida tartanka xisbiyadu yihiin.
Kadib, Wasiir Obsiye waxa uu ka soo sheekeeyey taariikhda Somaliland iyo waxqabadka xukuumadda uu ku jiro oo uu aad u ammaanay, sidoo kale waxa uu ka hadlay waxa uu qabtay 9kii bilood ee uu wasiirka ahaa. Ugu danbayntiina, waxa uu kaga baxay in uu hadalkiisa inta kale, u dhaafi doono wixii su’aalo ay dadku qabaan.
Hawl-wadeenna shirka oo uu hor-kacayo aqoon yahan Dhirane ayaa salaaddii cishaha kadib, waxa ay ka dhegeysteen amma ururiyeen su’aalaha ay ka soo qayb galayaashu weydiinayaan Wasiirka iyo talada ay ku darsanayaan mawduuca maanta shirku daarran yahay.
Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Waddani USA Mudane Jamal Daahir ayaa isagu dooddii ugu adkayd iyo su’aalaha la mari waayey kala hor yimid wasiirka, waxana uu hoosta ka xarriiqay in maanta hankeennu ka weyn yahay wasiir, M/xigeen doorasho ku soo baxayaana uu miiska saaran yahay, xilliganna aan loo baahnayn yooyootan iyo su’aalo buuq lagu geliyo taageerayaasha, wasiirkana waxan leehay buu yidhi, Wasiir shacabku waa Waddani, doorashadanna Ilaahay idankii waan helaynaa, adiguna hannaga dhex bilaabin olole. Waanan ku salaamayaa.
Aqoon yahan Ali Gaas ayaa isna ka daba maray Jamaal, oo si aqooni ku jirto u iftiimiyey sababta loogu baahan yahay in Waddani la taageero, waxana uu ka hor yimid doodda Wasiirka, oo uu u arko olole siyaasadeed. Talona waxa uu ku bixiyey in shirka noocan ah lagu gorfeeyo sidii Amb. Mohamed Ali loo taageeri lahaa, ee dhaqaale iyo taloba la isula bar bar taagi lahaa.
Mustafe Abdirahman iyo Bashir Galimays ayaa iyaguna si hufan uga hadlay siyaasadda maanta tolku uu tolku taageerayo, waxana ay biyo kama dhibcaan ku tilmaameen, in maanta aan loo baahnayn khilaaf iyo fikir ka hor yimaadda taageerada Amb. Mohamed Ali, balse is toosinta iyo xisaabtanka amma la shaqaynta xisbiga Waddani uu muhiim yahay.
Dhinaca kalena waxa ay Mustafe iyo qaar kaleba xajiin mariyeen xisbiga Kulmiye, isla markaana ay eedo u soo jeediyeen, iyaga oo ka duulaya dagaalladii sokeeye iyo xarakadii SNM oo ay ku mataaneeyeen xisbiga Kulmiye. Laakiin rag kale ayaa taasi ku tilmaamay dood raqiis ah oo aan la odhan karin uun xisbigaasaa SNM ahaa amma hebello ayaa dagaal innagu soo qaaday, sheeko laga soo gudbay in ay tahay ayaana loo arkay.
Runtii su’aaluhu may badnayn, waxana ay isugu soo biyo shubanayeen uun su’aasha ah….Maxaad ka xukuumad ahaan amma xisbiga talada haya ee KULMIYE uu shacabkan u hayaa amma u soo kordhin doonaa? Inkasta oo ay jireen talooyin iyo su’aalo toos u khuseeyey wasiirka oo uu soo jeediyey Abdirahman Abdillaahi Aamin oo weydiiyey, ” Wasiir Ma dhici kartaa…..waa sida aan jecellahaye, in aad bisha ugu danbaysa is casisho, sidii wasiirradii Habar Jeclo ee doorashadii hore? Si aad tolkaa ugu dhex yeelato sharaf iyo karaamo?
Wasiir Obisiye oo ah nin hadal yaqaan ah, siyaasaddana u farsamo badan, ayaa doodda Jamal wax kama jiraan ka soo qaaday, waxana uu yidhi, ” Jamal siyaasadda socod barad baad ku tahay, ee sida aad u hadlayso maaha xaqiiqdu. Waxanan kaa codsan lahaa, in aad dhinacyo badan ka eegto siyaasadda Somaliland, haddii kale waad ku hafan, daadka ayaana ku qaadi, hana ku deg degin …isaga intaa ayaan odhanayaa.”
Dhinca waxqabadka xukuumadda iyo waxa u qorshaysan mar uu su’aaleheeda ka jawaabayey, waxa uu sheegay in dadka degaanku intii uu joogay ay shaqo badan ka heleen xukuumadda, in badan oo shaqooyin haystaana ay jireen. Hoggaannada sare ee dawladdana ay qayb ka yihiin, inta dhimanna ay heli doonaan. Xisbiga uu ku jiraana uu xog ogaal u yahay baahida taalla degmooyinka Dilla, Idhan iyo Baki.
Gunaanadkii, waxa lagu ballamay in usbuuca danbe la kulmo, khadka telfoonkana lagu soo xidho, siyaasiyiin iyo odayaal badan oo gudaha iyo dibaddaba jooga.
Waxa qoraalkan diyaariyey
This post has been viewed 15201 times.